#kp #oli #kc #prachand #arjun #con #arrest #chaild #news NEWS coronavirus news corona #rape #balatkar #gang rape girl #sex # gang rape corona virus
जब नेपालमै सार्वजनिक भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री बोल्न सुरु गर्दा पो*र्न भिडियो देखियो
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले सोमबार दिउँसो पर्यटनसँग सम्बन्धित सुरक्षा निर्देशिका सार्वजनिक गर्न ‘जुम एप’ भर्चुअल बैठक आयोजना गर्‍यो ।
कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई प्रमुख अतिथि थिए । जब सार्वजनिक भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री बोल्न सुरु गरे, एक्कसी पोर्न भिडियो बज्यो । अनाधिकृत रुपमा भर्चुल मिटिङमा प्रवेश गरेका ‘ह्यारिस’ नामको आईडीबाट यस्तो हरकत भएको थियो । भिडियो बजेलगत्तै एडमिनले भिडियो काटेका थिए ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नेपालमा पर्यटन व्यवसायी समस्यामा रहेको, मजदुरले रोजीरोटी गुमाएको सन्दर्भ सुनाउँदा सुनाउँदै वेबिनारमा पोर्न भिडियो देखिएको थियो । त्यसअगाडि पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सम्बोधन गरेका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणका कारण विश्वका धेरैजसो देशहरुमा जुम एपको प्रयोग हुने गरेको छ ।
यस्ता मिटिङमा पछिल्ला समयमा ह्याकरहरुले अनाधकृतिक रुपमा ‘एक्सेस’ गरेर अश्लिल भिडियो बजाइदिने गरेका छन् । नेपालमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गर्दा यस्ता समस्या बढ्दै गएको छ । यो एप माथि तर सुरक्षा लिएर एपमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
भारत सरकारले त यो एप सुरक्षित नभएको भन्दै प्रयोगबारे गाइडलाइन नै जारी गरेको छ ।
यसअघि पनि धेरैपटक जुम एप बैठकमा गोपनीयताबारे प्रश्न उठेको थियो । सिटिजन ल्याबले जुम एपमा महत्वपूर्ण कमजोरीहरु औंल्याएको छ । उसका अनुसार जुम बैठक प्रयोग गर्दा संवेदनशील जानकारीहरु सार्वजनिक गर्नु सुरक्षित मानिँदैन ।
मिटिङको आईडी र पासवर्ड विभिन्न तरिकाबाट सेयर हुँदा त्यसको अनाधिकृत रुपमा चोरी गरेर ह्याकरहरुले यस्ता अश्लिल भिडियोहरु बजाउने गरेका छन् ।
दशैंको मुखमा अनुगमनका क्रममा यी स्थानमा भेटियो अखाद्य बस्तु
आज देखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्ने तर यस्ता छन् व्यवसायी र यात्रुका लागि सर्त
भूकम्प आउदा झ्यालबाट बैंकका कर्मचारीले हाम फाले पछि…
—“तस्बिर”— अभिनव प्रत्यूष
अमेरिकाबाट गायक रुपेशको कोशेकी रेल छ नाकामा
उपत्यकामा जारी साबिकको निषेधाज्ञा असोज १ गतेबाट अर्को आदेश नभएसम्म निरन्तर रहने
आज विश्वकर्मा पुजाको दिन यस्तो छ धार्मिक विश्वास र महत्व
नेपालमा चिनियाँ, रुसी र अन्य खोप निर्माताको चासो तर परीक्षण ?
सूचना बिभाग दर्ता नं.:१०२६/०७५-७६
DOIB Regd: 1026/075-56
इमेल: sabdanepal5@gmail.com, originalmedia11@gmail.com
फोन नं: ९८५७०६५१७६
रिपोटर: पवन लुइँटेल, मदन केसी
क्यामरा पर्शन: प्रकाश पाण्डे, विबेक बस्याल, बालकृष्ण बस्याल
© 2020 Sabda Nepal | All rights Reserved.